Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yesibili | Izindaba Zokuhamba
Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yesibili
UMariela Carril | | América, Iziqondiso
Ekuqaleni kwaleli sonto sethule ingxenye yokuqala ye- ukuvakasha kogu olusempumalanga yeNyakatho Melika, ugu oluhle olugcwele amadolobha amadala kakhulu e-United States naseCanada.
NgoLwesibili sikhulume ngeNew York, iBoston neWashington DC, okuyidlanzana lamadolobha aphakathi kwesimanje nelamakoloni lapho okuheha kakhulu umlando namasiko. Namuhla sekuyithuba lamadolobha angomakhelwane, IToronto, iMontreal neQuebec. Umqondo ngukuthi uyazi ukuthi ungawahlanganisa kanjani la madolobha nokuthi yini ongayihambela kuyo bese uzakhela owakho uhambo lwasogwini olusempumalanga.
Idolobha lokugcina esilihambele e-United States, esihlokweni esandulele, laliyiWashington DC Toronto Cishe kungamahora ayisishiyagalombili nohhafu ukusuka eWashington DC futhi ungangena indiza noma ibhasi noma isitimela. Ngebhasi ungathola amathikithi aqala ku- $ 30, ngokusebenzisa iwebhusayithi yeWanderu, bese uthatha ibhasi leMegaBus noma iGreyhound. Amahora we-15 wokuhamba, ngaphezulu noma ngaphansi.
Isitimela esiphakathi kwamadolobha womabili sibiza ngaphezu kuka- $ 150 kanti le nsiza ihlinzekwa ngu-Amtrak. Ungahamba futhi ukusuka eNew York ungene esitimeleni seMaple Leaf futhi ujabulele indawo enhle ye-Hudson River Valley enezivini zayo, izihosha zeFinger Lakes neNiagara Falls. Lesi sitimela siwela umngcele ukuze udlule emasikweni.
Yini ongayibona eToronto? Yebo, idolobha linokuheha okuyinhloko: i- I-CN Tower (futhi ukhuphuke uye kuwo futhi unamathele kuwo), the Isikhungo se-Air Canada el I-Royal Ontario Museum, the I-Aga Khan Museum, the I-Ripley Aquarium futhi i I-zoo yaseToronto.
Unalo ikhadi labavakashi? Uma yena I-Toronto City Pass enikeza isaphulelo esingu-41% uma ungena ezikhangisweni ezinhlanu eziphezulu (umbhoshongo, iminyuziyamu, i-aquarium kanye ne-zoo). Angiyikushiya ipaki yokuzijabulisa I-Medieval Times Dinner neTheatre futhi uma uthanda i-hockey yeqhwa khona-ke kukhona iHockey Hall of Fame.
Ngokufanelekile, vakashela iwebhusayithi yezokuvakasha yedolobha, Bona iToronto Manje, ngoba lapho uthola ukuthi kwenzekani edolobheni okwamanje: imicimbi, imibukiso, imisebenzi.
Kungamakhilomitha angama-541 ukusuka eToronto ngakho ngemoto lolu hambo luthatha amahora angaphezu nje kwamahlanu. Ukuvakasha nawe ungakwenza en isitimela noma ibhasi. Ungasebenzisa izinsizakalo ze-Via Rail Canada bese ukhetha phakathi kwamakilasi e-Escape, Economy, Economy Plus, Business noma Business Plus. Ungagibela isitimela ngo-6: 40 ekuseni bese ufika cishe emini: kusuka kuma-77 kuya kuma-260 amadola aseCanada ngokusho kwekilasi.
Montreal Kuyidolobha lesibili elinabantu abaningi Canada futhi libizwa ngaleli gquma elinemiqongo emithathu phakathi nendawo yalo. Kusesiqhingini saseMontreal futhi kunezinye iziqhingi ezizungeze ngobukhulu obuhlukile. Phakathi kweminyuziyamu eminingi nezindawo ezinconyiwe okumele kubonwe kukhona:
I-Notre-Dame Basilica, Isitayela semvuselelo yamaGothic esakhiwe ngeminyaka yo-20s yekhulu leshumi nesishiyagalolunye, sinendawo enhle yangaphakathi nophahla oluhlotshiswe ngezinkanyezi zegolide ezithatha umoya wakho.
IParc du Mont-Royal- Le paki enezintaba inezihlahla eziningi, izimbali nezihlahlana nezinhlobo eziningi zezinyoni. Yenzelwe ngo-1876 futhi abantu bayahamba ngezinyawo, ukugibela ibhayisikili, ukushibilika eqhweni, ukuhamba ngesikebhe, noma ukushibilika eqhweni.
I-Olympique Park: Yinkundla yezemidlalo yama-Olimpiki ethathe isikhathi eside ukuyakha kanti namhlanje, njengesikhangiso esikhulu, yisiteshi se-funicular esikusa esiqongweni segquma. Ukubukwa, kuhle kakhulu.
UMnyuziyamu Wezobuciko: uma uthanda ubuciko lokhu kungenye yezinto ezinhle kakhulu kule ngxenye yomhlaba. Isukela ku-1860.
Kunesifundazwe saseQuebec nedolobha, okuyinhloko-dolobha yalo. Yasungulwa ngo-1608 futhi isikhungo salo esingumlando yisibuko esihle nesibiyelwe esivela ngekhulu le-1985. Kusukela ngo-XNUMX kunjalo Amagugu Omhlaba.
Quebec Cishe amahora amathathu ukusuka eMontreal futhi ungahamba ngemoto, ibhasi noma isitimela. Iqiniso yilokho isitimela silula ngoba izihlalo zibanzi futhi kunethezeke ngokwengeziwe ukwelula izinyawo noma ukuphatha amapotimende. Ngaphezu kwalokho, isitimela sidlula emadolobheni amaningana amadala futhi sidabule phakathi kwamahlathi amahle. Njengoba kuvulwe amawindi muhle. Ungahamba ngesitimela bese ubuya ngebhasi, uma uthatha isinqumo sokuguqula iQuebec ibe uhambo losuku ukusuka eMontreal.
Uma ubhuka isitimela kusenesikhathi, ungathola izihlalo ezingambi eqolo (isitimela sibiza kakhulu kunebhasi). Ukuhamba ngesitimela kungamahora amathathu futhi unamapulagi, ngokwesibonelo, nendawo eningi kunendiza. Ngakolunye uhlangothi, amabhasi ahamba njalo ngehora ...
Yini okufanele uyivakashele eQuebec?
I-Basilica Sainte-Anne-de-Beaupré: Leli sayithi lisukela ku-1658 futhi liyindawo yokuhambela. Isonto lisukela ku-1887 yize isonto lamanje lisukela ku-1923 futhi laqedwa ngawo-60. Ngaphakathi, kukhulekelwa uSainte Anne de Beaupré.
Isigqoko sokuzivikela somlando kuyajabulisa futhi kuhle, kunezakhiwo ezindala, imigwaqo emincane, nabadlali basemgwaqweni.
I-Château Frontenac, ihhotela elidume kakhulu nelikhulu, elisenkabeni yomlando.
IDufferin Terrace, ngaphezulu kweCape Diamante
Udonga lwaseQuebec City namaGates, Amakhilomitha angu-4.6 ukuhamba ngezinganono, odakeni nokunye. Iyinkimbinkimbi yezakhiwo zamasosha ezakhiwe ngezakhiwo eziyi-10, okuyisivikelo esikhulu kwezempi eNyakatho Melika. Bheka uMfula iSt. Lawrence futhi waqala ukwakhiwa ngaphansi kombuso waseFrance. Ibunjwe njengenkanyezi enamaphoyinti amahlanu kodwa isakhiwo esikhona manje kungesesiNgisi futhi sakhiwa ukuvikela abaseMelika.
Indawo yasePitit Champlain nemigwaqo yayo eboshwe ngamatshe, izindawo zokudlela, amathilomu nezitolo ezinkulu.
Itheku eMfuleni iSt. Lawrence nepaki yayo, indlela yebhayisikili nemakethe yomphakathi.
Amathafa ka-Abrahama, iphaphu eliluhlaza okwedlulele okungelutho ngaphandle kwenkundla yempi endala kusukela ngekhulu le-XNUMX. Yindawo ekhethwe ngabantu ukuhamba nokuqoqa ipikinikini.
Isakhiwo sePhalamende, isihlalo sikahulumeni, i Umthombo waseTourny ngamajethi ayo amanzi angama-43 kanye ne-Observatory, konke kusegqumeni lasePhalamende.
Wendake: Uma uwuthanda umlando wabahlali bokuqala baseNyakatho Melika nansi indawo ongayifunda.
I-Isle of Orlèans, nezindlu zayo ezindala, amasimu alo namasonto. Kubukeka njengekhulu leminyaka elidlule futhi linentelezi yokuba ngenye yezindawo zokuqala zaseYurophu eMelika, okufana nokuzalwa kwezimpande zaseFrance. Kunamabhilidi angama-600 anomlando, ngakho-ke yisiza esihle kakhulu ngokwakha.
Ngokombono wenyoni, lezi yizona ndawo ezikhangayo ezivakashelwa yiQuebec. Kuyathakazelisa ukwazi lokho Phakathi kweMontreal neQuebec kukhona umgwaqo omdala, iChemin du Roy noma iKing's Way.Kwakuwumgwaqo wokuqala odlulayo phakathi kwamadolobha amabili nezinsuku ezisukela ku-1737. Ungayihamba futhi ngaleyo ndlela wazi izindawo ezinhle namadolobha, izigayo neminyuziyamu. Kungcono ukukwenza ngebhayisikili.
Ekugcineni, kufanele ukhulume imali encane futhi ukwazi lokho idola laseCanada cishe lingamasenti angu-0 uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Siyakuhalalisela uma unale mali yokugcina. Usunayo imininingwane emihle emadolobheni amakhulu aseMelika nawaseCanada oGwini oluseMpumalanga. Ingabe uhlele umzila wakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yesibili